दैनिक प्याज खानुका यि ६ आचार्यजनक फाइदाहरु, जान्नुभयाे भने आजैबाट खान थाल्नुहुनेछ – Sapana Sanjal
June 10, 2021 209
Sapana Sanjal : दैनिक प्याज खानुका यि ६ आचार्यजनक फाइदाहरु, जान्नुभयाे भने आजैबाट खान थाल्नुहुनेछ । आयुर्वेद विद्याका अनुसार प्याज निकै गुणकारी बस्तु हो ।
प्याजले खानालाई स्वादिष्ठ बनाउने काम त गर्छनै यो एक औषधि समेत हो । कयौं विरामीलाई यसले औषधिको काम गर्दछ । प्याज हाम्रो शरिरको लागि वरदान हो । प्याजले हाम्रो शरिरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई अधिक मात्रामा बढाउने गर्छ । यो खाना अरुची जस्ता सबै समस्याहरुको लागि निकै फाइदा जनक मानिन्छ । यस्ता छन् प्याज खानुका ६ फाइदाहरु:-
१) क्यान्सरको रोक्थाम गर्छ:- प्याजले क्यान्सर जस्तो गम्भिर रोगको रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ । यो रोगप्रतिरोधी क्षमताले भरिपूर्ण हुने गर्छ । प्याजमा भएको भिटामिन सि क्यान्सर रोकथामको लागि सहयोगी हुने गर्छ ।
२) पाचन क्षमता बढाउँछ:- प्याज शरीरको पाचन क्षमता बढाउन निकै उपयोगि मानिन्छ । प्याज खाएपछि खाना पचाउन निकै सहयोग पुग्छ किनकी प्याजको सेवनले पाचक रसको शरिरमा अधिक मात्रामा प्रवाह हुनेगर्छ । जो खान पचाउन निकै सहयोगी हुनेगर्छ ।
३) प्रतिरोधात्मक क्षमता:- प्याजले शरिरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्छ । विरामीलाई फाइदा जनक मानिन्छ । यो हरेक प्रकारको तरकारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्याजमा भिटामिन सी हुनेगर्छ ।
४) छालाको लागि उपयोगि:- प्याजमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी हुनेभएकाले भिटामिन ए, सी अथवा, इको मिसावट हुनेभएकाले तपाईंको छालालाई चमकदार बनाउन मद्दत गर्छ । प्याजको निरन्तर सेवन गर्नुभयोभने तपाईंको छाला निरन्तर चम्कने गर्छ ।
५) लामो आयुको लागि :- प्याजको रस कुनै जडीबुटी भन्दा कम छैन । यसले कयौं प्रकारको विरामी ठिक पार्ने गर्छ । त्यसैले यो भनिन्छकी प्याजले तपाईंको आयु बढाउन मद्दत गर्छ ।
६) यौ-.. न क्षमता : प्याजले यौ.. क्षमता बढाउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले शरिरमा इन्सुलिनको मात्रालाई बढाउँछ । साथै रगतमा सुगरको मात्रालाई पनि नियन्त्रण गर्छ ।
Prevपाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन,जेष्ठ २७ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextसार्वजनिक यातायात खोल्ने बिषयमा यस्तो निर्णय हुँदै !
८४ बर्षिय बुढि आमा यसरी गिट्टी कु टेर आफ्नो परिवार पाल्दै ,छोराले हेरेनन् ,कठै (हेर्नुस् भिडियो )
त्यसपछि उनलाई २२ बर्षिया युवतीको यस्तो जिच निकालेर खुवाइयो……
यसरी अर्काको बारीमा तरकारी चोर्दा चोर्दै फेला परिन चर्चित नायिका बिपना थापा (हेर्नुहोस भिडियो सहित )
गाउँपालिकामा अनुदान खान यस्तो समेत हुँदोरहेछ ! किसान देबीप्रसादले दिउँसै पारे रात (1354)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (888)